Doo nchịkọta nchịkọta nchịkọta: iche na ụdị, iche - Ugbo - 2020
Kedu otu esi ahọrọ onye na-ekpo ọkụ ihe ubi na-enye
Ihichapu ala azụ azụ site n'oge mgbụsị akwụkwọ dara ada na-eji akwụkwọ na-arụ ọrụ dị egwu ma na-ewe oge. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị na-eji onye nchịkwa ihe ubi maka nzube a, usoro dum ga-ewe obere oge. N'otu oge ahụ, ọbụghị na ị ga-eji aka gị ehichapụ akwụkwọ ndị anakọtara na ikpo: na otu pịa nke bọtịnụ, a ga-amanye ha n'ime akpa pụrụ iche n'enweghị nke fọdụrụnụ. Ka anyị leba anya n'ụdị ụdị nchịkwa ọkụ ubi ka mma ịhọrọ mgbe ịzụrụ ihe, na njirimara ndị ị chọrọ ịṅa ntị.
Site na mpụta
Na na na-enweghị shredder
Kedu ka o si arụ ọrụ
Ọganihu na nkwekọrịta
Kedu otu esi ahọrọ mgbe ịzụrụ
Uru na ọghọm nke ubi agụụ cleaners: reviews
Ụdị Cleaner Ọcha
Enwere ọtụtụ ndị na-ekpo ọkụ ubi n'ubi, dịka a na-akụ akwụkwọ: petrol, eletriki, na batrị kwadoro. A na-enwekwa ha n'ụdị dị iche iche: site na ngwaọrụ ndị a na-ejide n'aka na azụ azụ na ụdị uhie.
E nwere ụdị isi atọ nke ogige ubi ndị na-ehicha ọkụ:
A na-egwu ụda - Mmiri nke ikuku siri ike na-efesa epupụta na okpo. Ha kacha mma maka obere ubi ma ọ bụ maka ebe nwere ọtụtụ osisi na-eto eto na osisi. Ndị na-agba ume ga-enye aka ịfụ ihe mkpofu site n'ebe ndị siri ike (site n'okpuru bushes, site n'akụkụ na mgbawa n'etiti ogige ma ọ bụ ụlọ). Ngwaọrụ ndị a na-afụ ọkụ, ma ha dị mma maka ịkwaga nnukwu ahihia ubi n'ime nnukwu ikpo, nke a ga-enweta ngwa ngwa mgbe e mesịrị.
Ndị na-amị mkpụrụ akwụkwọ - na-arụ ọrụ na-abụghị nke ha: ha na-aṅụ akwụkwọ ahụ n'ime akpa ahụ. A na-ekpuchi akpa mkpofu nke ngwaọrụ ndị a ma ghara ịchapu mmiri, ọ dị mfe iwepụ ma kpochapụ ihe mkpofu. Akpa maka ndị na-anakọta ihe na-ekpo ọkụ dị ọkụ (40-50 lita), mana ka ha jupụtara, ha na-adị arọ, ha na-emekarị ka ha maa jijiji.
Ejikọtara ogige ndị na-ehicha ubi - Ụfọdụ igwe jikọtara na onwe ha ọrụ nke mgbakọ mgbakọ agụụ na-arụ ọrụ nke ịfụ, ọ pụkwara ịdị na-arụ ọrụ nke ikpo ahịhịa. E nwere ngwaọrụ na plastik na ihe nkedo azụ. Mgbe ị na-azụrụ, ị ga-echeta na ọkpụkpụ ígwè ndị a dịgidere ma dịrị ogologo karịa plastik. Ụdị ụfọdụ na-ekwe ka ịgbanwere ọnọdụ dị iche iche (blower-vacuum chopper) na aka nke bọtịnụ, ma na ụdị ndị ọzọ na-agbanwe n'etiti ụdịdị adịghị mma (ịkwesịrị igbanwe nkwụ na ihe ndị ọzọ). Ndị na-ekpo ọkụ na ndị na-ekpo ọkụ n'ubi na-edozi ihe kacha mma kacha mma maka ihe mgbaru ọsọ ha n'ihi ntụgharị ha. Ụfọdụ ihe na-adịghị mma na-emepụta ụdị nkwụsị nke na-ewepụ ma na-agbanwe n'oge usoro nhicha.
Ị ma? Osisi ndị mara mma nke Babilọn bụ otu n'ime ihe ịtụnanya asaa nke ụwa oge ochie. A dinara ha ma too n'oke eze Nebukadneza Nebukadneza nke Nebukadneza nke Abụọ nke dị nso na obodo dị ugbu a bụ Hill, nke dị n'ógbè Babil na Iraq.
Ndị na-ehicha ọkụ eletrik na-abata n'ụdị abụọ: ejiri eriri eletrik na batrị.
Ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ eletrik na-arụ ọrụ abụghị naanị nhọrọ dị jụụ na nke kachasị ọnụ ala, kamakwa ihe kachasị mfe na nimble na-arụ ọrụ. Otú ọ dị, ụdọ eletrik na-apụtaghị na ha kacha mma maka obere ala ubi. Ụdị ejiji na-atụle 4 kilogram ma ọ bụ na-erughị ma haziri maka iji ntuziaka.
Ụkpụrụ dị mfe na doro anya nke njikwa ngwaọrụ ahụ na ikpo ọkụ gasị - nke a na-enweghị obi ụtọ, yana ike, nke dị nso na ike nke ngwaọrụ ndị nwere engine gasoline. Ma ụdọ ike na-eme ka ebe ahụ kpuchie, ọ pụkwara ịbụ ihe mgbochi mgbe ọ na-arụ ọrụ gburugburu osisi na bushes. Enwere ike ịzụta ngwaọrụ dị otú ahụ ma ọ bụrụ na ntaneti ahụ dị n'ime mita 30 site na mpaghara a ga-ehicha.
Na onye na-ekpo ọkụ na-enweghị ihe ọkụkụ na-arụ ọrụ na batrị, ọ na-adịrị nnọọ mfe ịbanye na njedebe nke nnukwu ubi. Ọ dị mfe ịrịgo n'ebe ndị siri ike (gazebos, ravines). Ndị na-agbanye ọkụ eletrik na-agbakarị ihe dị ka kilogram 4.5 ma nwee oke mma.
Ndị ọrụ ubi ndị a na-enweta mgbasa ozi n'etiti ndị na-achọghị ka ha jiri ọgba aghara na-eme ka ọgba aghara, ha achọghịkwa ịdabere n'ogologo ụdọ ike. Mana anyị ga na-echeta na, ịnweta ìhè ma rụọ ọrụ ngwa ngwa, onye ọrụ ahụ ga-ejedebe n'oge ọrụ. Batrị ndị a na-agbanye ike na-adịru ihe dị ka elekere (ọ dabere na ike nke batrị) ya mere ọ bụrụ na mpaghara ahụ dị ukwuu, otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ onye ọrụ ga-ezu ike, zuo ike ma chere ruo mgbe ebughachi batrị ọzọ.
Ị ma? Onye mbụ n'ime ụwa ka a ga-akwụ ụgwọ maka ịkwọ ụgbọala na nku ọkụ bụ onye na-elekọta ugbo Norwegian. Ihe omume a dị egwu mere na Norway na 1995.
A na-ebugharị ụdị nke na-arụ ọrụ mmanu na ebe ọ bụla n'ime usoro ahụ, ha ejikọtabeghị na ókèala ụfọdụ. Ọtụtụ ụdị na-atụle kilogram ise ma ọ bụ karịa na ịdị arọ nke ngwaọrụ ahụ na-ebuwanye ibu nke mmanụ ụgbọala ahụ wụsara n'ime tank. Otú ọ dị, maka nnukwu ubi ma ọ bụ ebe nwere ọtụtụ mmiri, akwụkwọ dị arọ na mpempe ndị ọzọ, ihe nchịkwa dị otú a ga-abụ nhọrọ kacha mma.
Ụdị dị iche iche site na obere ndị na-ebugharị obere ihe, dị arọ ma dị ọnụ ala - onye injinya ya kwesịrị ịna-arụzi ya. Ihe ka ọtụtụ n'ime ndị na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-emepụta ihe dịgasị iche iche nwere engines abụọ na-achọ ịmị mmanụ na mmanụ na mmanụ. Ụdị nke nwere engines anọ nwere ọnyá na-emerụ ikuku na-adịchaghị mma ma na-agwụ aghara.
Hụ ntụle nke nkedo ike, chainsaws, njigide, nchara ọkụ ọkụ, mmanụ ọkụ mmanụ, gas trimmers, eletrik eletrik, ụlọ na ọkụ ọkụ ọkụ.
Ndị na-ekpo ọkụ na-emepụta mmanụ ụgbọala na-emepụta oké mkpọtụ mgbe eji ya eme ihe. Ọ bụ ezie na ndị ọrụ ntanetịime ihe ubi nke oge a malitere ịrụ ọrụ dị ntakịrị karịa oge gara aga, ma ha ka na-eme ụda olu mgbe ọ gbanwere. Onye ọrụ kwesịrị iyi mkpuchi mgbe nile, si otú ahụ chebe akụkụ anụ ahụ. Na njirimara nke ihe nlereanya, decibels nke mkpọtụ ọ na-arụpụta na-egosi mgbe niile, yabụ mgbe ịzụrụ, ị nwere ike ịhọrọ ngwaọrụ dị jụụ.
Ọ dị mkpa! Ekwesiri icheta na anaghi egbochi ngwaọrụ ndi na - eme ka uzo dara oke ebe ndi mmadu bi: tupu asatọ nke uhuruchi ma n'afo iri abali abuo.
E nwekwara ndị na-ehicha ihe ubi n'ubi nke ụgbọ ala abụọ ma ọ bụ anọ. Ọ dị nnọọ mfe ịrụ ọrụ na ndị na-afụ ụda ahụ, ebe ọ bụ na ngwa nke ngwaọrụ adịghị adaba n'aka onye ọrụ. Onye ọrụ ahụ na-ebugharị ụgbọ ahụ ma ọ bụ na azụ dị ka onye ọkụ. Onye na-ekpocha ihe ubi nke na-acha uhie uhie nke na-agafe n'ókèala ahụ na-ahapụ ya ụzọ dị ọcha, a na-etinye akwụkwọ ndị anakọtara n'ime akpa a haziri maka ha.
N'ime ụdị ụdị ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-enwe ike kachasị mma na iji ya eme ihe. Ma n'otu oge ahụ, ha na-ewekwu ohere nchekwa ma nwee ọnụahịa kasị elu.
Ihe ọ bụla n'ime ụdị (ọkụ, ọkụ ọkụ, batrị ma ọ bụ petrol) nwere ike iji ihe mkpofu ahịhịa. Ngwa a n'oge ọrụ nke onye na-eme ihe ubi na-ekpochapụ ihe mkpofu nile (epupụta, obere alaka) nke dabara n'ime ngwa ahụ, ihe ejiji na-esi na ya abanye na akpa maka nchịkọta.
A na-egosiputa ihe mkpofu a na-anakọta ma na-ekpo ekpo nke dị ka otu ruo iri. Nke ahụ bụ, kilogram ise nke ihe ndị a gbakọtara n'oge ị na-egweri ga-atụfu oge iri na ụda ma jiri nwayọọ nwayọọ daa n'ala ala nchịkọta.
Ọ bụrụ na onye na-azụ ahịa chọrọ ịzụta ihe nchịkwa nke nchekwa ihe ọkụkụ ubi na onye na-egweri egwu, mgbe ahụ ịkwesịrị ịhọrọ n'etiti ngwaọrụ nwere ọrụ a.
Ọ dị mkpa! Iwu nke ugbu a nke Russia Federation ekwechila akwụkwọ ọkụ na akwụkwọ ndị ọzọ na-emepụta ihe ndị dị na mbara ala nke ụlọ obibi. Ọ na-emetọ gburugburu ebe obibi ma na-ejekwa ozi dị ka ebe ọkụ. Ndị na-eme ihe ike na-enwe mmetụta na-achịkwa ọrụ na nnukwu mma. N'okwu a, igwe maka ịnakọta akwụkwọ na nhazi ha n'ime mulch ga-abụ ụzọ dị mma. Ugbo akwa akwa akwa ma obu akwa ga-egbochi uto nke ata ah u, nakwa, nke nta nke nta na-agbagharia, ga-eme ka ala di ala juputa ala.
Site na netwọk - ụdị ndị a dị maka onye ọ bụla, ha anaghị akwụ ụgwọ ma dị irè. Ụdị ụfụ dị otú ahụ abụghị nanị na ọ na-akụda akwụkwọ ahụ na ihe dị ọcha - ọ nwere ike, na-aṅụ, na-anakọta ha na akpa pụrụ iche maka nchịkọta ihe mkpofu. Ma ọ bụrụ na a na-enye chopper na ihe nlereanya a, igwe ahụ ga-akụkwa ha ngwa ngwa, nke mere na onye na-arụ ọrụ ga-emerụ akpa ahụ n'oge na-adịghị anya.
Ụdị eletrik dị ntakịrị, n'ihi na ịdị mfe nke ebu ha na-enye mgbatị ma ọ bụ ugwu nke yiri akpa azu. Ugboro ugboro, e nwere ụdị akwa nwere ogologo oge, na-eru n'ala, na njedebe nke obere wiil abụọ - na-enyere aka ịkwaga ngwaọrụ n'ebughị ikuku ya n'enweghị isi.
Lezienụ anya na iwu maka ịhọrọ mmanụ eletrik, ọkụ ọkụ ọkụ.
Site n'ụzọ, enwere ike iji ya dị ọcha na ebe buru oke ibu - ihe kachasị bụ na a na-enye ndị ọzọ eletriki eletrik (na mgbidi nke ụgbọala ma ọ bụ nkedo) na mgbidi ndị dị n'èzí nke outbuildings, ma ọ bụ ị nwere ike iji otu ma ọ bụ ọtụtụ transports ntinye eletriki. Ngwaọrụ na-arụ ọrụ nke ọma na ọbụna na-arụ ọrụ n'isi ụtụtụ agaghị egbochi ndị agbata obi ha ka ha hie ụra.
Na batrị - ụdị ndị a na-arụ ọrụ nke ọma, ha adịghị arọ. Site n'enyemaka ha, ị nwere ike iwepu ngwa ngwa site na obere ogige, hichaa ahịhịa, akwa akwa na patio. Onye na-ekpo ọkụ ihe ubi ahụ dị na batrị ahụ na-ejide ya na mmiri mgbochi n'akụkụ nkuku.
Banyere njedebe nke ọrụ onye ọrụ dọrọ aka ná ntị ọkụ. Batrị dị iche nwere ikike dị iche, na, ya mere, oge dị iche iche na-arụ ọrụ. Mgbe batrị kwụsịrị, onye ọrụ ga-ejikọ ya na netwọk maka ịja ma chere maka oge akọwapụtara na njirimara nke ngwaọrụ ahụ, mgbe nke ahụ ị nwere ike ịmalite ọrụ.
Ụdị dị na batrị na-elekarị anya dị ka ndị na-ehicha ihe ubi nke na-arụ ọrụ site na netwọk: enwere ubu ubu, e nwere ngwaọrụ ndị nwere wiil abụọ dị na isi nke nkpọkọta nchịkọta. Ha na-arụ ọrụ n'atụghị egwu, n'enweghị mmetọ nke gburugburu ebe obibi na decibels ụda.
Na peturuolu - ndị na-ekpo ọkụ ubi ubi ndị a dị nnọọ ike, ma na-eme mkpọtụ. Nke ọ bụla n'ime ụdị ndị a nwere engine abụọ ma ọ bụ engine anọ. Otu tank tank zuru ezu maka ngwaọrụ iji rụọ ọrụ otu awa.
Mpempe akwụkwọ anọ nke ihe nlereanya ahụ pụtara na ụgbọ ala ahụ na-eji obere mmanụ ụgbọala eme ihe, anaghị eji mmanụ eme ihe ọ bụla, ma ọ bụ obere ihe ọkụkụ. Ụdị nwere engine abụọ-stroke nwere obere ahụ, ha dị mfe ịchekwa karịa ọtụtụ mmanụ ụgbọala, ma n'oge ọrụ, a na-eji mmanụ mmanụ mgbe niile.
Chọpụta ihe ị ga-achọ mgbe ị na-ahọrọ benzokosy, petrol trimmer, snowthrower, obere-traktọ.
Ndị na-efe mmanụ na-adịkarị arọ karịa ndị ibe ha. Ebe ọ bụ na oge ọrụ ha na-adaba n'aka onye ọrụ ahụ, iji mee ka ịdị arọ dị arọ, a na-agbanye ngwaọrụ ahụ na teepu siri ike maka iburu ubu, ma ọ bụ n'ụdị nkedo azụ azụ.
Ị ma? Dị ka nchọpụta sayensị si kwuo, ọkara ọkara ugbo nwere ike imeziwanye ndụ mmadụ. Ịgha mkpụrụ, egwu ala na akwa ma ọ bụ mowing lawn maka minit 30 na-ebelata ihe ize ndụ nke enweghị ike site n'ihe fọrọ nke nta ka ọkara.
Ihe niile dị n'elu nwere uru ha na ụkọ ha.
Wired Garden Vacuum Cleaners
Oge a na - arụ ọrụ anaghị ejedebe - ị nwere ike ịrụ ọrụ ruo ogologo oge ịchọrọ ịmechapụ ebe ahụ.
Onye na-enwetakarị ike (45-50 lita), adịghị mkpa ka ọ ghara ikpocha akpa ahụ iji chịkọta epupụta.
Ịdị arọ na arụ ọrụ dị jụụ nke ngwaọrụ.
Ndụ ndụ ogologo oge tụnyere ndị na-ekpochapu ọkụ ọkụ, enweghị nkwụsị nke ike batrị ma ọ bụ ike nkwụsị.
Ogologo oge ugo.
Ịdị ike - nnukwu akpa ngwa ngwa pụtara ibu dị arọ nke ngwa ngwa.
Ndị na-ehicha ihe ọkụkụ batrị
Dị mfe, mgbe ha na-arụ ọrụ, ha dị mfe ibugharị n'ubu ahụ.
Kọmpat, anaghị achọ nnukwu ohere nchekwa.
Enweghị ike iji ya - mpaghara kpuchie abụghị nanị ụdọ ike, ya mere enwere ike ịfefe ngwaọrụ ahụ n'ebe ọ bụla.
Ọ dị mkpa ịmara ụdị njirimara iji ṅaa ntị mgbe ị na-ahọrọ screwdriver, ụgbọ, sprinkler, ihe mkpofu ahihia, chopper, crusher ọka, pruner, ọkụ ọkụ ọkụ, oghere ubi, ihe na-esi ísì.
Oge ojiri oge: Batrị na-agbapụ mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ngwaọrụ ahụ ga-ebikwaghachi.
Gasoline engine na-eme ihe ubi
Ike dị elu, n'ihi ya, akwa arụmọrụ.
Mbugharị - ngwaọrụ enweghị ụdọ ike, n'ihi ya onye na-arụ ọrụ adịghị mkpa ịdị na-aga n'ihu na ebe ọkụ eletrik.
Ukwu maka ihicha nnukwu ebe.
Ọtụtụ ihe nwere nkà nwere ike ime site na aka - ụfụ mmiri snow, windo generator, oche na-agba ọsọ, ịsa mmiri n'oge okpomọkụ, ihe mgbochi, onye na-agbanye ọkụ, akwa ọkụ, nkume awara, pergola, obere traktọ, ụlọ griinụ nwere ọnụ ụlọ.
Ngwaọrụ na - emepụta ụda karịa ụda eletriki (ndị agbata obi nwere ike ịjụ mkpọtụ).
Nnukwu ibu mmiri. Ngwaọrụ n'onwe ya na-atụkarị ihe kariri kilogram 5.5, nnukwu mmanụ ụgbọala na-agbanye n'ime tank ma buru ibu nke akwụkwọ a gbakọtara.
Ịgba ọsọ siri ike n'etiti ụdị ofufe na mgbakọ mgbakọ.
Ngwaọrụ siri ike ịmalite n'ụtụtụ.
Ọnụ ego dị elu (okpukpu ise na isii karịa nke ndị na-ekpocha ọkụ eletrik).
Ị ma? Na nke mbụ, e si na Germany na Sir George Ishem bịa na Germany site na Germany n'afọ 1847. Otu onye na-enwe obi ụtọ na-atụ anya na ha ga-adọta ezigbo ndị gnomes na ubi ya.
Iji chọpụta ihe nlereanya nke nchịkwa ihe nchịkọta ubi na-adaba adaba maka otu ọkwá, ị ga-enweta azịza nye ajụjụ ndị a:
Ngalaba a chọrọ ka a kpochaa bụ ihe kachasị mkpa. Ọ bụrụ na ogige ahụ dị ntakịrị, ị nwere ike ịhọrọ ihe eletrik (sitere na mains ma ọ bụ na batrị), na iji ike ma ọ bụ ịfụ ọkụ. Maka akụkụ buru ibu, họrọ ihe nlereanya na arụmọrụ dị elu (nke nwere gasoline engine). Ọ bụrụ na ogige ahụ dị n'elu ma buru ibu, otu onye na-ehicha ihe ọkụkụ nke nwere okpukpu anọ nwere mmanụ ụgbọ ala kacha mma. Ọ bụrụ n'ime nnukwu ogige e nwere ravines, iyi nke iyi na ihe mgbochi ndị ọzọ, mgbe ahụ, a na-ahọrọ onye na-agba ume na mmanụ ụgbọ ala, mana obere (ubu).
Ma ọ ga-adị mkpa iji chịkọta epupụta - ọ bụrụ otú ahụ, mgbe ahụ ịmịnye na-enweghị nkwụsị bụ nhọrọ kachasị mma. Ngwa ndị na-enye naanị mmịkpọ agụụ anaghị adị mma n'ịchịkọta ma na-echekwa akwụkwọ mmiri, ma a na-anakọta ngwa ngwa na-acha ọkụ ọkụ ma nke a ga-azọpụta ọtụtụ oge.
Ọ ga-adị mkpa iji zipu akwụkwọ ndị ahụ iji mepụta mulch - ọ bụrụ otú ahụ, mgbe ahụ, a ghaghị iji shredder kwadebe ihe nchekwa ọkụ ubi ahụ. Ejiri ngwaọrụ a n'ime ngwaọrụ ma rụọ ọrụ n'otu oge na nsị nke epupụta n'ime. Ugbua akwukwo ahihia abata n'ime akpa maka ichikota akwukwo, nke apuru iji mee ka akwa ma obu akwa akwa.
Ike nke ube a na shredder - e nwere ụdị plastik ma ọ bụ nchara ígwè. Ọ ka mma ịhọrọ ihe nlereanya na ụrọ ígwè, dịka ha siri ike ma ga-adịru ogologo oge.
Ergonomics nke onye na-ehicha ihe ubi - ọ bụla ngwá ọrụ kwesịrị ịdị mfe iji. Ya mere, ị ga-eleba anya ma ọ dị mfe iji gbanwee bọtịnụ na otú eriri ubu siri ike. Ọ bụrụ na ịhọrọ ọnye mmiri na mmanụ ụgbọ ala, ọ ka mma ịhọrọ ngwaọrụ n'ụdị azụ azụ, nke nwere ogwe aka - nke a ga-adị mfe ma na-ekesa ibu dị n'ubu onye ọrụ ahụ.
Mgbe ị na-ahọrọ, ọ dịkwa mkpa iji nyochaa otú oke na mkpuchi dị na ngwaọrụ ahụ, ma ọ na-emepụta vibration n'oge ọrụ na otú o si dị ike.
E kwesiri ilebara anya ma o di mfe ibido onye na-edozi ihe ubi, ma ike ma obu ike igbu ya ezuola.
N'ihe dị ka ngwaọrụ dị mma na nchekwa, ọ bụ na ọ dịghị mkpa ịtọye ọnụ ụlọ maka ya (ụdị ụkwụ igwe).
Maka batrị agbadoro batrị, enwere ike ibudata batrị. N'ọdịnihu, nke a ga-abụ ihe dị mkpa n'ịkwụsị oge ọrụ.
Дополнительное оборудование - к некоторым моделям прилагаются разборные трубы и съёмные сопла, что неплохо, если имеется мало места для хранения аппарата. При покупке нужно также учитывать простоту и лёгкость сборки-разборки.
Ị ma? В Англии есть сад-музей, носящий название "Ядовитый сад". В нём выращивается сто видов ядовитых растений. Сад открыт для посещений, но его посетителям строго запрещено нюхать, трогать руками или пробовать на вкус растущие там экспонаты.
Chebe onwe gị mgbe ị na-arụ ọrụ ma nwee obiọma n'ebe ndị ọzọ nọ:
na-eyi ekweisi na-echebe ntị gị site na mkpọtụ;
na-eyi uwe mgbanaka na nkpuchi uzuzu;
ekwela ka ndị mmadụ na anụ ụlọ gaa n'ókèala ebe a na-arụ ọrụ nhicha;
Egbula ọbụna ndị na-ada ụda nke ọma n'isi ụtụtụ ma ọ bụ ná mgbede, ka ị ghara itinye aka na ndị ọzọ ndị ọzọ.
Onye na-ekpocha ihe ubi nke ubi ga-eme ka ndụ dịkwuo mfe maka ndị nwe ụlọ ezumike na ụlọ ndị ọzọ. Nhọrọ kachasị mma ga-abụ ihe atụ nke arụkọtara ọrụ atọ ahụ: agụụ (ịmị ọkụ), fan (ịfụ) na chopper. Ngwa dị otú a ga-enyere aka iji nhazi ụlọ na ubi ubi kwa izu. Ma ọ bụrụ na mpaghara maka nhicha dị oke, ịkwesighi ịchekwa ụgbọ ala, ka ị ghara ịkwa ụta maka ego efu.
Ntụle vidiyo nke onye na-ehicha ọkụ
Ha na-aṅụ ihe ọjọọ ma na-ekpo ekpo n'otu oge ... ha na-afụ ụfụ. Pound n'ime ikpo ma chịkọta rake. Igwe, ebe a na-adọba ụgbọala, okporo ụzọ. Site na akwa ifuru, akwa ifuru, bushes na-agbapụ.
Ezi ụbọchị. Oge ọhụụ nke abụọ. N'ikwekọ, akwụkwọ ahụ ka mma iji zụlite wee bulie ihe niile nwere onye na-ehicha ihe. Ebe ọ bụ na m na-arụ ọrụ na nhicha ọ bụghị naanị m yad kamakwa ndị ahịa, enwere m ike ịsị na onye na-ehichapụ ọkụ na-echekwa akwụkwọ na-acha akwụkwọ akọrọ na obere obere. Ọ bụ ezie na ọ na-amasị m ịnweta ndụ dị mfe karị adịghị mkpa ịgbagharị gburugburu lawn ahụ iji chịkọta akwụkwọ. Gbanwee wee gaa bulie. Enwere m ihe ntinye ihe ntanetị dị ala. Nkwụsịtụ n'oge ọrụ nke ụdọ ike, na ihe ... ọ bụ ihe kpatara gị iji lee ha anya ma lekọta obere nlekọta. Onye na-ehicha ihe na-arụ ọrụ kwa ụbọchị maka awa 2-3. N'ozuzu, afọ ojuju. Nsogbu bụ onye achọghị ịnakọta acorns bastard ...
Onye na-ekpocha ihe ubi na-ekpo ọkụ bụ ihe dị mma n'ihe banyere ikuku na-afụ, ma dị ka nchịkọta nke akwụkwọ na petals na-echegbu onwe ya, ọ bụ ihe na-arịa ọrịa nke ukwuu
1. Ọ dịghị anakọta akwụkwọ mgbochi kama ọtụtụ ụdị ọkụ mulch
2. na-erughị ala iji
3. ike egwu nke ukwuu ka aka na-agbapụ mgbe minit 10 gasịrị
4. mkpọtụ dị otú ahụ na ndị agbata obi mgbe ngwa nke abụọ malitere ịtụ ụjọ
5. nnukwu mmanụ ọkụ n'ihi na ihe ha ga - anakọta ga - arụ ọrụ n'ogo kachasị elu
na otu okwu, aha ya, onye na-ehichapụ ihe mgbu, ọ bụghị ihe ziri ezi. N'ihe arụ ọrụ nke abụọ na-agba ume, ọ bụ ihe bara ezigbo uru, mana ihe ndọghachi azụ bụ nanị mkpọtụ, ọ bụ ezie na ị nwere ike ịrụ ọrụ nwayọ na ọsọ ọsọ.
Nke a na-emetụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ihe niile ruru rubles iri na ise, ebe a na-ezute ụdị ọnụ ego.